I-Cleveland e-The Historic Morehead Inn B&B - I-Airbnb
I-Cleveland e-The Historic Morehead Inn B&B
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Billy
U-Billy Ungumbungazi ovelele
Leli gumbi elihle ligcwele ukukhanya kwelanga kwemvelo elinombono obheke igceke langaphambili kanye nevulandi. Inombhede we-canopy ophakeme, olingana nendlovukazi, kanye nebhavu neshawa. Umkhawulo wokuhlala izihambeli ezingu-3 (kanye nokuhlehla); wonke amanani ahlala kabili. Ikhaya lethu eliseDilworth elibanzi nelinomlando linezindawo zomlilo ezisondelene kakhulu, amagumbi angasese aphambili.
Izivakashi zasebusuku e-Morehead Inn zijabulela amagumbi ezivakashi ayingqayizivele agcwele impahla yesikhathi kanye nenqwaba yezinsiza ezinhle. Amanani ethu ahlala abantu ababili futhi ahlanganisa indawo yokupaka etholakala mahhala, okugeza okuyimfihlo okune-Nest Fragrances NY nezingubo zokugeza zikanokusho, ezenzelwe uku-oda ibhulakufesi laseNingizimu, i-inthanethi engenantambo, i-cable TV, ukushisisa okumaphakathi nomoya, namafeni osilingi. Siyinkampani ezinikele eqaphela imvelo, egxile ekongeni amanzi namandla, kanye nokukhawulela amapulasitiki asetshenziswa kanye.
I-HDTV engu-40" ene- ikhebula ye-premium, I-Roku, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
ubusuku obungu-7 e- Charlotte
Sitholakala nje isigamu semayela ngaphandle kwesiphithiphithi sase-Uptown, sitholakala endaweni yomlando yase-Dilworth. Ungahamba uye ezindaweni zokudlela ezidumile kanye nemigwaqo eluhlaza, uzothokozela konke ukuthula nezinto ezitholakala endaweni yethu.
Sinezisebenzi zasendaweni ezitholakala kuzo zonke izidingo zakho futhi ngemva kwamahora, umphathi wethu Wesakhamuzi usemsebenzini wakho.
UBilly Ungumbungazi ovelele